Hirshabelle oo ka hadashay Aragtideeda ku aadan Sharciga doorashooyinka. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Hirshabelle oo ka hadashay Aragtideeda ku aadan Sharciga doorashooyinka.
Hirshabelle oo ka hadashay Aragtideeda ku aadan Sharciga doorashooyinka.
Cali Cabdullahi Xusseen ( Guudlaawe) Madaxweyne kuxigeen Dowlad Goboleed Hirshabeele ahna Kusimaha Madaxweynaha ayaa cadeeyey mowqifkooda ku saabsan doorashada soo socota oo Madaxda Dowladda Soomaaliya ay sheegeen inay noqoneyso mid qof iyo Cod ah.
Sidioo kale waxa uu cadeeyay in Dowlad Goboleedka Hirshabeele ay ayidsantahay (taageersan tahay) sharciga doorashooyinka oo dhawaan labada Aqal ee Baarlamaanka dowlada federalku meel mariyeen isla markaana Madaxweynuhuna saxiixay.